Midowga Afrika oo Somaliya ku cadaadinaya in kiiska badda lagu dhameeyo Adis ababa…. – Hareerley News
Ururka Midowga Afrika ayaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ku cadaadinaya sidii kiiska Badda ee yaalla Mxkamadda ICJ una dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya loogu dhameyn lahaa Magaalada Adis ababa ee Caasimadda Dalka Itoobiya.
Guddi ka mid ah Midowga Afrika ayaa warqad casuumaad ah u soo diray Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo sheegayay in arrinta Badda ee Kenya iyo Soomaaliya uu dhameynayo Midowga Afrika.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iska diidday casuumaaddaas waxaana ay sheegtay in ay ku kalsoontahay go’aanka Maxkamadda ICJ ee The Hague.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa qoray in 21kii Bishan ay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ka jawaabtay warqadda casuumaadda ah ee Midowga Afrika.
9ka ilaa 13ka Bisha soo socota ayey Maxkamadda ICJ dhegeysaneysaa wareeg kale oo ka mid ah dacwadda Badda ee ay Soomaaliya geysay sanadkii 2014kii.
Kenya ayaa xoog ku saareysa Waddamada ku lugta leh arrintan in meel aan Maxkamad ahayn lagu dhameeyo kiiskan.
Dhinaca kale Kenya ayaa waxaa ay horay u sheegtay in ay Ciidamo geyneyso Biyaha Soomaaliya ee ay sheeganeyso,waxaana Baarlamaanka Dalkaas uu gudbiyay mooshin Ciidan lagu geynayo biyaha Soomaaliya.
Sh/Shaakir iyoTaliyaha Ciidamada AMISOM Oo Kulmey
Sh/ Maxamed Shaakir Cali ayaa Aqalaka Hogaanka Galmudug kula kulmay Saraakiil ka socotay Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo uu Hoggaaminayo Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tigabu Yilma. Kulanka ayaa labada dhinac waxaa ay diirada saareen Arrimaha ammaanka deegaanada Galmudug gaar ahaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaannada ay kaga sugan yihiin Dowlad Goboleedka Galmudug. […]
Qaar ka Tirsan Madaxda Gobalka Banaadir qaasatan Gudoomiye ku Xigeenada Oo Safarada dibadda ah laga Joojiyay.
Dowladda Soomaaliya ayaa 26-kii bishii Julay oo ku beegneyd laba habeen kadib qaraxii Xarunta Dowladda Hoose ee Gobalka Banaadir soo saartay amar safar dibadda ah iyo mid gudaha ah oo ka baxsan Muqdisho looga mamnuucayo dhamaan Guddoomiye ku xigeenada gobalka Banaadir. Warar ay tabinayaan warbaahinada ayaa sheegaya in la Ogaadey liiska magacyada Guddoomiye ku xigeenada […]
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Jabuuti:-(Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dalka Jabuuti ayaa Maanta waxaa uu wadahadallo miro-dhal ah la qaatay dhigiisa dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle. Kulanka ayaa waxaa ay uga wada hadleen xaaladaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee Gobolka, gaar ahaan danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya labada Jamhuuriyadood,waxaana ay ku […]